Ronaldo Oo Laga Diiday Bixinta Lacago Kaash Ah Si Uu Xabsi Uga Badbaado - Miyuu Hada Galayaa? %
Kiiska udhaxeeya Xafiiska hantidhowrka dowlada dhexe ee Spain iyo laacibka kooxda kubada cagta Real Madrid iyo dalka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu umuuqdaa mid soo gaba gaboobi doona maalmaha soo socda.
Waxaa jiray dalab uu horey ugudbiyey Crsitiano Ronaldo, kaasoo lagu waramay inuu ahaa in laacibkaan uu bixiyo lacago si uu uga badbaado Xabsi uu geli karo, maadaama lagu soo eedeeyay inuu is-daba marin ku sameeyay Cansuur laga rabay.
Sida laga soo xigtay Majalada El Mundo, xidiga Real Madrid, ayaa wuxuu ogolaaday bixinta lacago, isagoo dareemaya inay tahay mid cadaalad ah, islamarkaana udhiganta lacagihii canshuurta ahaa ee xaqa loogu leeyahay.
Tani ayaa waxay ka dhigan tahay in kabtanka xulka qaranka kubada cagta Portugal, uusan geli doono Xabsi ah, islamarkaana uusan kiiskaan dib dambe ugu soo laaban doonin.
Si kastaba ha ahaatee, Europa Press ayaa sheegaysa in wada hadalo dhacay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay keentay dalab aan ‘ku qanacsan yahay oo ah’ bixinta qiyaastii 4-5 milyan oo euros, taas oo ay diideen xafiiska hanta-dhowrka Spain.
Xafiiska Dacwad-oogaha ayaa ku eedeeyay khiyaano ah 14.7m euros oo ka dhan ah Crsitiano Ronaldo, iyada oo miisaaniyadda ku andacooneysa in uu hadda u adeegayo xabsi ah, marka loo eego afar sababood oo kala duwan.